Kuyalelwe iziteshi ezintathu zikamabonakude ukuthi ziyeke ukusakaza ucansi | News24
Kuyalelwe iziteshi ezintathu zikamabonakude ukuthi ziyeke ukusakaza ucansi
Cape Town – Inhlangano elawula ezokusakaza eGhana, iNational Media Commission (NMC), isiyalelwe iziteshi ezintathu zakuleliya lizwe ukuthi ziyeke ngokushesha ukusakaza ucansi, yathi “ucansi lwangempela phakathi kwabantu akufanele noma yinini kudluliswe” ngale kwemibandela.
Lezi ziteshi zontathu, i-XYZ TV, iThunder TV kanye ne-Ice TV zatshela le nhlangano elawula ezokusakaza ukuthi zisakaza ucansi ngoba nezinye zeziteshi zikamabonakude ezibangisana nazo ziyalusakaza.
Yize noma iNMC ingeke ikwazi ukuhlawulisa lezi ziteshi ngokukhombisa ucansi njengoba imithetho yaseGhana njengamanje ingakuvumeli lokhu, kodwa iNMC ithi ingakwazi ukuyalela lezi ziteshi ukuthi ziyeke ukusakaza ucansi.
OLUNYE UDABA: Isiteshi se-TV sinqaba ukudlala isikhangiso sikaMengameli
Ngemuva kokukhononda, iNMC ithe ukusakaza kwalezi ziteshi akuhlangabezani nezinga leNMC lokusakaza.
“Iziteshi zixolisile zabe sezizibophezela ukuqinisekisa ukuthi angeke kusaba khona ucansi eziteshini zazo,” kusho uSihlalo weNMC, uNana Kwasi Gyan-Apenteng, esitatimendeni.
Uqhube wathi lezi ziteshi zibe sezidalulela iKhomishana ezinye iziteshi zemisakazo kanye nezikamabonakude ezithi nazo zisakaza izinto ezifanayo.
Kodwa-ke esinye seziteshi, i-Ice TV, nesithe sizoyilandela imiyalelo, kubikwa ukuthi sesisabise iNMC ngokuyithathela izinyathelo zomthetho ngalesi sinqumo, sathi sifuna inkantolo yaseGhana icacise mayelana nokuthi le nhlangano elawula ezokusakaza inalo yini ilungelo lokusivimba ekusakazeni ucansi esiteshini saseGhana esingakhokhelwa (free-to-air).
IGeneral Manager ye-Ice TV, uSamuel Owusu Asare, utshele umsakazo waseGhana, iCiti 97.3 fm ukuthi bazonikela enkantolo ukuze icacise ngoba uthi ukukwazi ukuthi bangatshelwa ukuthi abayeke ukusakaza ucansi kodwa ekuhambeni kwesikhathi babone ezinye iziteshi sezisakaza lona ucansi. Uthi lokhu angeke baze bakwamukele neze.